WAR CUSUB: Xasan Xanafi oo xalay ka baxsaday xabsiga dhexe | Berberatoday.com
WAR CUSUB: Xasan Xanafi oo xalay ka baxsaday xabsiga dhexe
Muqdisho(Berberatoday.com)—War hadda soo dhacay ayaa sheegaya in xalay xabsiga dhexe ee magaalada Mudisho uu ka baxsaday weriye Xasan Xanafi oo muddo toddobaad ka hor lagu xukumay dil toogasho ah.
Sida ay sheegayaan ilo wareedyo lagu kalsoon yahay, waxaa la xiray ciidamadii lahaa heegankii xalay ee xabsiga dhexe, kuwaasi oo lagu eedeeyay inay iyagu ku lug leeyihiin sii deynta dembiilaha dil sugaha ahaa.
Wararku waxay intaasi ku darayaan in Xasan Xanafi uu xabsiga ka baxsaday xalay fiidkii xilligii cashada, iyadoo sidoo kale ay xabsiga ka baxsadeen qaar kale oo isaga la xirnaa waxayna arrintaasi walaac ku abuurtay ehelada dadkii uu dilay.
Dhinaca kale shacabka magaalada Muqdisho oo saakay hadal heynta ugu badan ay tahay baxsashada Xasan Xanafi ayaa la sheegayaa inay ku dhaliilayaan ciidamada Dowladda baxsashada maxaabiista dembiilayaasha ah.
Ilaa iyo iminka wax war ah kama soo bixin taliska ciidamada Asluubta oo iyagu gacanta ku haya xabsiga dhexe, inkasta oo wararka qaar sheegayaan in gacan ka hadal uu dhex maray maxaabiistii xalay fakatay iyo ilaalada xabsiga.